Teboka famatarana #3 | Grandir à Antsirabe
Teboka famatarana #3
#3 – MIVELONA ENY AMIN’NY LALANA
Rehefa tonga eny amin’ny lalana ny ankizy iray dia mametraka paik’ady hivelomany :
1/ Paik’ady amin’ny toerana
Fisafidianana toerana amin’ny alalan’ny fitsipikaroa :
Toerana hiroboroboan’ny toe-karena (Tsena, gara…) ahafahana mangataka, miasa na mangalatra.
Toerana ahafahany matory am-pilaminana
Tsy ny vondrona no misafidy ny toerana fa ny toerana no mamolavola vondrona.
Ireo tanora no manangana toerana mahavoaharo ao anatin’io toerana io.
Ny fahitana ny toerana ihany koa dia miteraka voka-dratsy satria manidy tena tsikelikely ao anatin’io toerana io izy ary miteraka fatahorana hiala amin’io toerana ahitany filaminana io. Ny toerana hafa ankoatry ny lalana dia heverin’ilay tanora ho toerana mitera-doza, toerana mbola tsy fantatra ary tsy misy filaminana.
2/ Paik’ady amin’ny vondrona
Fisafidianana vondrona : fitadiavana filaminana sy famantarana
Ny fitsanganan’ny vondrona dia miteraka anjara asa mazava ho an’ny mpikambana tsirairay (isaky ny antoko dia misy antana-tohatra, misy ny mpitarika ary misy ireo mizaka ny tsindry hazolena) fa ihany koa ny “fiankinan-doha” amin’ny iray amin’ireo mpikambana.
Io fifandraisam-po ara-tsosialy io dia anisan’ny manamarika ireo tanora ary mahatsiaro tena ho tandindonin-doza izy raha tapaka io fifandraisana io.
Na dia jadona aza io fifandraisana io dia manana endrika filaminana, satria dia afaka ahitana endrika fanararaotam-pahefana izany ho takalon’ny fiarovana, indrindra eo amin’ireo lehibe izay manindry ny kely (fakana an-kitsirano, herisetra…)
MG	Teboka famantarana #4 : Lalana, tontolon’ny …
Non classifié(e)	Fampisehoana nataon’ny ankizin’ny CHT…